Jaamacada Oxford ayaa bixinaysa waxbarasho koorsooyin lacag la'aan ah ee 'Mooc' - BBC News Somali
Jaamacada Oxford ayaa bixinaysa waxbarasho koorsooyin lacag la'aan ah ee 'Mooc'
Image caption Jaamacadda Oxford ayaa ka mid noqon doonta koorsooyinka ay bixiyaan Mooc markii ugu horaysay.
Jaamacada Oxford ayaa ku dhawaaqday inay bixinayso markii ugu horaysay koorsooyinka internetka ee Mooc - "massive open online course" iyadoo kaashanaysa jaamacadaha Maraykanka ee bixiya koorsooyinka internetka.
Koorsooyinka oo lacag la'aan ah ayaa aad looga jeclaaday boqolaal jaamacadood waxayna leeyihiin malaayiin arday.
'Meel ka baxsan fasalada Oxford'
Lahaanshaha sawirka Harvard X
Image caption Oxford ayaa ku biiraysa edX ee waxbarashada internetka ee ay dhigtaan sagaal milyan oo arday
Hay'adahan ayaa bixiya koorsooyin internet oo lacag la'aan ah, oo ay heli karaan ardayda meel walba oo ay joogaan adduunka.
Jaamacada Oxford ayaa hadda ku dhawaaqday inay bilaabayso inay u qorto ardayda koorso bilaabanaysa Febraayo 2017-ka, oo magaceeda la yiraahdo: "From Poverty to Prosperity: Understanding Economic Development".
Ngaire Woods, oo ah gudoomiyaha Blavatnik, ayaa sheegay in koorsooyinka internetka ay yihiin "sida ugu fiican ee lagu faafin karo tacliinta oo ka baxsan fasalada Oxford"
Prof Woods ayaa sheegay in kuliyadda ay muhiimada saarayso sidii loo hormarin lahaa dowladda, taasna waxay ku xiran tahay "shaqaale tacliin leh, macalimiin, hal abuurayaal ganacsi, suxufiyiin, iyo bulshada".